Hiran State - News: Dowlada Uganda oo ciidamo hor leh u soo direysa Somaliya si loo xaqiijiyo doorashada soo socota iney ku dhacdo si nabad ah.
Dowlada Uganda oo ciidamo hor leh u soo direysa Somaliya si loo xaqiijiyo doorashada soo socota iney ku dhacdo si nabad ah.
Uganda:-Dowlada Uganda ayaa shaaca kaqaaday iney ciidamo hor leh u soo direyso dalka Somaliya si ay u buuxiyaan booska ciidamada Somaliya oo ay iyagu saameyn u yeelatay qilaafka hogaank sare.
4000 ku oo ciidamo hor leh ayaa soo gaaraya Mogdisho oo kaliya ma jirto meel kale oo ciidmdaasi ay ka howl galayaan oo dalka Somaliya ka mid ah xitaa lama hubo iney la waregayaan Mogdisho maadama ayasna jirin hogaamiyaal Somaliyeed oo la xisaabtami kara Amisom, oo ay halkii ay isweydin lahayeen ciidamadan caasimada Somaliya lagu daabulayo waxa ay qabanayaan oo ay kuwii iyaga ka horeyey oo 15 kun kor u dhaafayo qabanwaayeen.
Waxaa ayaan daro ah iney dowladaha Uganda iyo Burundi dagaal ba'an u galeen si aan looga joojin dhaqaalaha ay bixiyaan midowga Yurub halka hogamiyaashii wadanka u dhashay oo ay dowladahaasi magacooda dhaqaalaha ku helayeen ay iska aamusan yahiin oo ay iyagu isku muuqdaan ayuu yiri Hussen oo ka mida ahaa ciidankii xooga dalka Somaliya oo hada howl gab ku ah magaalada Mogdisho.
Magaalada Mogdisho waxa ku sugan oo ka diiwan gashan ciidamo lagu qiyaasay 16 Kun oo Somali ah. waxaa kale oo ku sugan 15 kun oo African ah, hadane waxaa la soo wadaa dhawr kun oo hor leh dhamaantoodna waxey iska joogayaan dhawr xaafadood oo Mogdisho katirsan. hadaba waxey su'aal ka taaan tahay dhawr iyo labaatan kun oo ciidan ah ma deeqdaa inta u dhaxeysa Garoonka diyaaradaha iyo Villa Somaliya?
Hogaankii dalka waxey ku mashquulsan yahiin waqtiga ha naloo kordhiyoiyo doorasho dhici meyso wadankiina waxaa lagu soo daabulayaa ciidamo aanan isku af dhaqan iyo diin midna aheyn shacabka Somaliyeed. waxaa kale oo ay ku faraxsan yahiin in ay ilaalo ka hayaan ciidamo African ah oo aan Somali aheyn.
· admin on May 08 2011 15:09:37 · 0 Comments · 1517 Reads ·
14,579,809 unique visits